Hoggaamiyaha ugu sareeya Iran oo sheegay in Mareykanku uu riixayo Sucuudiga si uu uga hortago Iran - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldHoggaamiyaha ugu sareeya Iran oo sheegay in Mareykanku uu riixayo Sucuudiga si uu uga hortago Iran
Hoggaamiyaha ugu sareeya Iran oo sheegay in Mareykanku uu riixayo Sucuudiga si uu uga hortago Iran
May 1, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Hoggaamiyaha ugu sareeya Iran Ayatollah Ali Khamenei. [Lahaanshaha Sawirka: AP]
Tehran-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaha ugu sareeya Iran ayaa Mareykanka ku eedeeyay in uu isku dayayo in uu dab ku shido dhibbaatooyinka gobolka isaga oo ku boorinaya saaxiibkiisa Sucuudi Caraabiya in uu kahor tago Tehran.
Hadal uu baahiyay taleefishinka dowladda, Ayatollah Ali Khamenei ayaa ku ceshay Isniintii in Mareykanka uu faraha kala baxo Bariga Dhexe isagoona sheegay in cid kasta oo dooneysa in ay dhibbaateyso Iran laga adkaan doono.
“Qaababka looga hortagayo Iran waxaa kamid ah in la booriyo hoggaamiyaasha aan khibrada lahayn ee gobolka,” Khamenei ayaa sidaa yiri, taasoo u muuqata in uu u la jeedo Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sucuudiga ee Maxamed Salmaan, oo 32-sanno jir ah.
“Mareykanku wuxuu isku dayayaa in uu ku booriyo Sucuudiga in ay ka hortagaan Tehran… ujedkoodu waaa in ay gobolka ka abuuraan dhibbaatooyin badan… si Muslimiinta ay ugu khasbaan in ay iska soo horjeestaan.”
“Haddii dowladahaan ay heli lahaayeen caqli badan, kama aysan hor imaadeen Iran, haddii ay ka horyimaadaan Iran, waa laga adkaan doonaa.”
Khamenei wuxuu sheegay in Iran aysan dooneynin in ay xaddiddo saameynta ay ku leedahay Bariga Dhexe. “Maraykanku waa kuwa ka baxaya… Bariga Dhexe, Galbeedka Aasiya iyo Gacanka Bari Persian waa gurigeenna.” ayuu sii raacshay.
Iran iyo Sucuudiga ayaa lahaa dagaal sokeeye muddo dheer, iyaga oo ku tartamaya maamulka gobolka laga bilaabo Ciraaq iyo Suuriya, iyo Lubnaan iyo Yeman. Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa si xoogan u taageeray Sacuudi Carabiya dadaalkeeda ku wajahan ka hortaga Iran.
February 10, 2018 Labo askari oo katirsan ciidamadda Turkiga oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Afrin ee Suuriya